Madaxweynaha Turkiga Iyo Mucaaridkiisa Oo Guulo Ka Sheegtay Doorashadii Degmooyinka – somalilandtoday.com
Madaxweynaha Turkiga Iyo Mucaaridkiisa Oo Guulo Ka Sheegtay Doorashadii Degmooyinka
(SLT-Ankara)-Doorashadii Guddoomiyayaasha degmooyinka iyo Golayaasha deegaanka oo Axadii shalay ka dhacday dalka Turkiga ayaa ahayd mid adag oo uu xisbi xaakimka Erdogan ee AK party dadaal ugu jiray inuusan lumin awooda ay ku leeyihiin magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Turkiga.
Natiijada horudhaca ah ayaa muujineysa in xisbiga AK ee Erdogan uu lumiyey kuraas badan oo uu ku lahaa golayaasha deegaanka ee qaar kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn sida Ankara, Izmir iyo waliba Istanbul.
Magaalada caasimada ah ee Ankara oo ay ku xoogan yihiin xisbiyada mucaaridka ayaa gebi ahaan ka baxday gacanta xisbi xaakimka AK, hogaamiyaha mucaaridka Ankara Mansur Yavas ee isbaheysiga xisbiyada mucaaridka Nation Alliance ayaa helay in ka badan 50% cododka.
Magaalada sadexaad ee Izmir ayey sidoo kale isbaheysiga mucaaridka codod badan ka heleen, waxaana loolankaasi guusha ku raacday murashaxa mucaaridka Mustafa Tunc Soyer oo helay in ka badan 58%, halka murashaxa xisbiga AK party Nihat Zeybekci uu helay in ka badan 38%.
Natiijada codbixintii magaalada ugu weyn ee dalkaasi ee Istanbul ayaa weli la sugayaa iyadoo ay labada dhinacba ay sheeganayaan guulo.
Dhinaca kale xisbiga AK party iyo xulafadooda xisbiga Nationalist Movement Party (MHP) ayaa sheegay in ay si weyn ugu guuleysteen magaalooyinka kale, halka Isbaheysiga mucaaridka oo ka kooban labada xisbi Republican People’s Party (CHP) iyo Good Party ay codod badan ka heleen sadexda magaalo ee ugu waaweyn oo ay ku jirto caasimada Ankara.
Guulaha mucaaridka gaaray ayaa la sheegayaa inay la xariirto dib u dhaca ku yimid dhaqaalaha dalka Turkiga sanadihii lasoo dhaafay, arrintaasi oo si weyn u dhaawacday ololihii doorashada ee xisbi xaakimka AK party.